Bagan Keyboard APK Download for Android Latest Version - APK Basket
Bagan Keyboard APK Download for Android Latest Version
Bagan Keyboard APK isaMyanmar Keyboard from emphasizing and hard-working development on Myanmar Language typing system.
4.5/5 Votes: 123,943
Bagan Innovation TechnologyVersion
Bagan Keyboard APK isaMyanmar Keyboard from emphasizing and hard-working development on Myanmar Language typing system. It also provides the perfect solution of Android Myanmar Keyboard for those who communicates via instant messages, with an easier, faster, and smarter. It is also nominated by Telenor Myanmar asaBest Myanmar Android App for year 2014, Digital Winners event.
– ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ ယူနီကုဒ် ဖောင့်သွင်းထားလားဆိုတာကို Auto စစ်ပေးပြီး တစ်ခါတည်း Unicode Keyboard ပြောင်းလဲပေးတဲ့ Auto Font Detect & Keyboard Selection
– ယူနီကုဒ် လက်ကွက် Layout ၃ မျိုး စိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရတယ် (Bagan Style, သင်ပုန်းကြီး Style, Unicode Style) ကြိုက်တဲ့ Layout နဲ့ ရိုက် ထွက်တဲ့စာက Unicode Order နဲ့ ထွက်တယ်။
– Bagan Style က သဝေထိုးရှေ့ ရရစ်ရှေ့ ရိုက်တဲ့ ပုံစံ ၊ သင်ပုန်းကြီးက သဝေထိုးရှေ့ ရရစ်နောက် ရိုက်တဲ့ပုံစံ၊ Unicode Style က သဝေထိုးနောက် ရရစ်နောက်ရိုက်တဲ့ပုံစံ
– ကိုယ့်ဖုန်းထဲက သီချင်း၊ ဗီဒီယို၊ Contact တွေကို ဇော်ဂျီနဲ့ မှတ်ထားတယ်၊ ယူနီကုဒ်ပြောင်းချင်တဲ့ သူတွေအတွက် Bagan Keyboard Setting က Unicode Converter ဆိုတာ နှိပ်ပြီး အလွယ်လေးလုပ်လို့ရ (Backup အရင်ချပြီး သတိထားပြောင်းပါ။ ဇော်ဂျီ ပြန်ပြောင်းချင်ရင် ခက်လိမ့်မယ်)
– SMS တွေ ဖတ်လို့မရဖူးလား၊ ဖတ်ချင်တဲ့စာကို ဖိပြီး Copy ကူးလိုက်တာနဲ့ တစ်ခါတည်း Convert လုပ်ပြီးသား စာတွေကို မြင်ရလို့ အလွယ်လေး ဖတ်လို့ရ။
– Voice Typing လုပ်ချင်တာလား၊ Bagan Keyboard မှာ Google Voice Typing ရော Bagan Voice Typing (မြန်မာပြည်တွင်းထုတ် နည်းပညာ) နှစ်ခုလုံးရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ငွေလဲနှုန်းတွေ၊ ရွှေဈေး၊ ကုန်ဈေးတွေကို အသံနဲ့ မေးလို့ရတဲ့ Bagan Voice Command။ လောလောဆယ် Partial Release ဖြစ်တဲ့အပြင် Beta အဖြစ်ထုတ်တာမို့ User အကုန် မရသေးပါဖူး နောက်ပိုင်း အကုန်ရမှာပါ။ သုံးတဲ့လူတွေက အရမ်းများတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်း Release လုပ်နေတာပါ။
– ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ ယူနီကုဒ် ဖောင့်သာမှန်၊ ကျန်တာ ဘာမှ လုပ်စရာမလိုဖူး။ အလုပ်တွေ အကုန် Bagan Keyboard တစ်ခုနဲ့ တင်အကုန် အဆင်ပြေ။